Kulan cayaareedkii Finaalka Copa Libertadores ee Kooxaha Boca Juniors v River Plate oo la Baajiyay iyo xilliga dib loo dheelayo oo shaaca laga qaaday+SAWIRRO – Gool FM
Kulan cayaareedkii Finaalka Copa Libertadores ee Kooxaha Boca Juniors v River Plate oo la Baajiyay iyo xilliga dib loo dheelayo oo shaaca laga qaaday+SAWIRRO
CR Shariif November 25, 2018
( Buenos Aires ) 25 Nof 2018. Weerar ay ku qaadeen Bas-ka kooxda Boca Juniors taageerayaasha River Plate ayaa sababtay in la baajiyo kulankii finalka Copa Libertadores lugtiisa labaad.
Kulankan weyn oo ay ku xafiltamaan kooxda ugu awooda badan horyaalka Argentine ayaa maanta la cayaari doonaa marka saacada UK tahay 08:00 pm dhanka geeska Afrikana tahay 11:00 saac kaddib 24 saac oo ay dib uga dhacday waqtigii saxda ahaa ee loo calaamadeeyay in kulankaa la dheelo.
Arinkaan ayaa lagu shaaciyay bogga Twitter River Plate – markii laba saacadood oo jaha wareere ay soo martay garoonka River ee Monumental stadium, waxaana dib loo dhiga bilaashada dheesha laba kol waqtidayii kala ahaa 21:00 iyo 22:15.
Sida ay ku warameyso waqrbaahinta Argentina, cayaariyahanada Boca ayaa loo geeystay dhibaato markii Baskii ay saaraaneey lagu weerar dhalooyin iyo wax yaabo kale iyadoo sido kale uu wax yeelo u geeystay gaaska ay isticmaalayeen police-ka.
Qaar kamida cayaariyahanada, oo uu kamida yahay laacibkii hore ee Manchester City Carlos Tevez, waxaa la warinayaa in uu dhib soo gaaray iyo xitta qaarkood ay matageen waxaana durbada daaweyn ku bilaabay daqaatiirka kooxda.
Waa markii ugu horreysay oo ay finalka Copa Libertadores ay isaga hor yimaadaan laba koox oo hal wadan ka dhisan iyadoo lugtii hore ee kooxahaan galeen bar-baro 2-2.
Kooxdii koobkan ku guuleysata ayaa xagaagan u mataleysa koonfur America koobka kooxaha adduunka ee bisha soo aadan ka furmaya dalka Isutaga Imaaraadka caraba ee Abu Dubai.
HORDHAC: SS Lazio v AC Milan, Kulanka Hardanka Booska Afaraad
Ernesto Valverde oo ka warbixiyay sababta ka dambeysa barbarihii ay xalay la galeen kooxda Atletico Madrid